Nitondra fandriam-pahalemana izy, Fiangonana Eran-tany maneran-tany Switzerland (WKG)
"Ary efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika" Romana 5: 1
Tao anatin'ny sarisary nataon'ilay vondrona mpanao hatsikana Monty Python, vondrona jiosy iray izay be zotom-po (mazoto) nipetraka tao anaty efitrano maizina ary nandinika ny fanonganana an'i Roma. Hoy ny mpikatroka iray: “Nalain'izy ireo daholo ny fanananay, tsy avy aminay ihany, fa tamin'ny razantsika sy ny razanay koa. Ary inona no nomen'izy ireo valisoa ho antsika? "Ny valiny nomen'ny hafa dia:" "Ny lakan-drano, trano fidiovana, làlana, fanafody, fanabeazana, fahasalamana, divay, fandroana ho an'ny daholobe, afaka am-pilaminana amin'ny arabe ianao amin'ny alina mandehana, izy ireo mahalala ny fomba hitandrina. "
Somary sosotra loatra ny valiny, hoy ilay mpikatroka: "Eny daholo ... ankoatry ny fanadiovana tsara sy ny fitsaboana ary ny fanabeazana ary ny fanondranana voajanahary ary ny fikarakarana ara-pahasalamana ... inona no nataon'ny Romanina ho antsika?" Ny hany valiny dia hoe: "Nitondra fandriampahalemana izy ireo! "
Ity fitantarana ity dia nahatonga ahy hisaina ny fanontaniana izay ataon'ny olona sasany hoe: "Inona no nataon'i Jesosy Kristy ho antsika?" Ahoana no hamalianao izany? Rehefa afaka manoratra lisitr'ireo zavatra maro nataon'ny Romana isika, dia tsy isalasalana fa hameno ny zavatra maro nataon'i Jesosy ho antsika. Fa ny valiny fototra dia ho toy ilay nolazaina tany amin'ny faran'ny skény - nitondra fiadanana io. Nambaran'ireo anjely izany tamin'ny nahaterahany: "Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary ho fiadanam-be eto an-tany amin'ny olona finaritra!" Lioka 2,14
Mora ny mamaky ity andinin-tsoratra ity ary mieritreritra hoe: “vazivazy ianao! Fiadanana? Tsy mbola nisy fiadanana teto an-tany hatramin'ny nahaterahan'i Jesosy. ”Nefa tsy miresaka momba ny fiafaran'ny ady mitam-piadiana na ny fiafaran'ny ady isika, fa momba ny fihavanana amin'Andriamanitra izay tian'i Jesosy hanolotra antsika amin'ny alàlan'ny sorona nataony. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Kolosiana 1,21: 22, "Ary aminareo izay efa tafasaraka taloha sy fahavalo araka ny fanahy amin'ny asan'ny asa ratsy, izy dia nampihavana tamin'ny vatan'ny nofony tamin'ny fahafatesana, mba hanamasinana anareo ho masina sy tsy misy tsiny. amin'ny tsimatimanota eo anoloany. "
Ny vaovao mahafaly dia tamin'ny nahaterahany, ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany ho any an-danitra, Jesosy dia efa nanao izay rehetra ilaintsika mba hihavanana amin'Andriamanitra. Ny hany tsy maintsy ataontsika dia ny manaiky azy ary manaiky ny tolotra omeny amin'ny finoana. "Noho izany, afaka mifaly amin'ny fifandraisantsika vaovao tsara amin'Andriamanitra isika ankehitriny satria efa nihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika." Romana 5:11